What's So Good About Good Friday? — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့အသေခံသောနေ့ရက်ကာလကိုမှတ်မိဖို့ကပုံမှန်ဒါဟာင်. တစ်ဦးကိုခစျြတစျခုပျောက်ဆုံးသူမည်သူမဆိုသင်သည်သူတို့အပေါ်အောင်မြင်ပြီးသောနေ့ရက်ကာလကိုဘယ်တော့မှမေ့လိမ့်မယ်သိတယ်. ဒါဟာအသက်တာ၏အဆုံးဖွင့်, ထိုသို့ကှေဲဖှယျဖွင့်.
ဒါပေါ့, လူသားတစ်ဦးအပြေးပြိုင်ပွဲအဖြစ်, ကျွန်တော်တို့ချစ်ရသူမသာသတိရကြပါ. အရေးကြီးသောအများပြည်သူကိန်းဂဏန်းများအချိန်မတိုင်မီသေဆုံးရသောအခါ, ကျွန်တော်တို့သတိရနှင့်သူတို့အဖြစ်ကိုကောင်းစွာငါတို့မှခေါ်ဆောင်သွားသောနေ့ရက်ကာလကိုညညျးတှား. ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမျိုးကိုနေ့ကမာတင်လူသာကင်း Jr ကအောက်မေ့. ပစ်ခတ်ခဲ့သည်, နေ့ကိုယောဟနျက F Kennedy ကအသတ်ခံရ. သို့သော်သူတို့အားအထူးသဖြင့်ရက်ပတ်လုံးကောင်းသောအဖြစ်ရည်ညွှန်းဘယ်တော့မှနေကြတယ်. သူတို့သညျကြောက်မက်ဖွယ်လက်ထက်၌, ချစ်သူတို့ယောက်ျားအန္တရာယ်ရှိတဲ့လုပ်ကြံသဖြင့်အသတ်ခံရဘယ်မှာ.
သေး, နှစ်ထောင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းနာ​​ဇရက်မြို့သားယေရှုဟာသူ့ကိုယ်ပိုင်အန္တရာယ်ရှိတဲ့လုပ်ကြံသဖြင့်အသတ်ခံခဲ့, ကျွန်တော်ကောင်းမွန်သော "အဖြစ်ထိုနေ့၌သတိရ” သောကြာနေ့. အဘယ်အရာကိုအများဆုံးလူ့သမိုငျးလူကိုအကြောင်းပြောဆိုသောအခါ, နေ့ကိုအကြောင်းဒါကောင်းပါတယ်အကြမ်းဖက်မိမိရနျသူတို့ကိုအားဖြင့်ရိုက်နှက်သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသည်?
လူဆိုးတို့သည်ဘုရားသခင်၏သားတော်ကိုသတ်မှကြံစည်မယ်လို့ဆိုတဲ့အချက်ကိုကြေကွဲဖွယ်ဖြစ်ပါသည်ကြောင့်ခြောအစဉ်အဆက်ကျူးလွန်အကြီးမြတ်ဆုံးအပွစျဖွင့်. ဒါပေမယ့်သူသေဆုံးရှေ့မှာသို့မဟုတ်ကြောင့်ပြီးနောက်အခြားမည်သည့်အသေခံမတူဘဲဖြစ်ပါသည် . ကျနော်တို့အကွောငျးရငျးမြားစှာအတှကျ "Good" ကိုသောကြာနေ့ထိုနေ့၌ခေါ်နိုင်ပါတယ်. သူကနှစ်ဦးရှိပါတယ်.
ကျွန်တော်တို့အများစုကသေဆုံးချဉ်းကပ်လာတဲ့အခါ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာရဲ့အလုပျ၏အဆုံးမှကြွလာတော်မူခြင်းနှင့်ငြိမ်းချမ်းသောကြွင်းသောအရာများအတွက်မျှော်လင့်နေ. သို့သော်သခင်ယေရှုလက်ဝါးကပ်တိုင်မှသှားသောအခါ, သူဟာသူ့ရဲ့အသက်တာရဲ့အလုပျ၏အရေးအပါဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစတင်ခဲ့သည်. ယေရှု၏သေခြင်းတစ်ဦးနှလုံးစည်းချက်၏အဆုံးထက်ပိုပြီးခဲ့သည်; ဒါကြောင့်အပြစ်ရှိသောသူတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းအလိုငှါဘုရားသခင်၏ရဲ့အစီအစဉ်ကိုကွပ်မျက်ခဲ့သည်. ယေရှုသည်ဘုရားသခင်၏လက်မှငါတို့ကိုကွဲကွာသောအပြစ်တရားပေါ်တွင်ယူဖြေရှင်း, သို့မဟုတ်ရှင်ပေါလုကပြောပါတယ်အဖြစ်, ယေရှု, "သူ့လက်ဝါးကပ်တိုင်၏အသွေးအားဖြင့်မိဿဟာယအောင်" (ကောလောသဲ 1:20).
ဂလာတိ၏ bittersweet စကားကိုနားထောငျပါ 3:13, ကျမ်းစာလာသည်ကားသည်ကျွန်တော်တို့ကို-"ခရစ်တော်အဘို့ကျိန်ဆဲဖြစ်လာသဖြင့်ပညတ်တရား၏ကျိန်ခြင်းမှရွေးနှုတ်တော်မူကျွန်တော်တို့ကို, " 'ကြိအပင်တစ်ပင်ပေါ်ဆွဲထားသောသူသည်လူတိုင်းဖြစ်ပါတယ်' '
သူ့ရဲ့အပြစ်ကင်းစင်နေသော်လည်း, ယရှေုခရဆိုးသောသူတို့အရပ်၌ရပ်လျက်, ကျွန်တော်ရရှိခဲ့ပါတယ်င့်သောတရားသဖြင့်စီရင်ယူ.
1 ပတေရုသ 3:18 ကပြောပါတယ်, "ခရစ်တော်လည်းအပြစ်များအတွက်တစ်ချိန်ကခံစားခဲ့ရများအတွက်, မတရားသောသူတို့သည်အဘို့ဖြောင့်မတ်, သူသညျဘုရားသခငျထံသို့ငါတို့ကိုပို့ဆောင်စေခြင်းငှါ, ... "
2. ဒါကြောင့်ဇာတ်လမ်း၏အဆုံးသည်မဖြစ်သေးသောကြောင့်, ကောင်းသောသောကြာနေ့သည်ကောင်း
ဘုရားသခငျသညျသူ့ကိုထမွောကျ, သေမင်း၏ဝဒေနာ loosing, သူ့ကိုကကငျြးပခဲ့ခံရဖို့အဘို့မဖြစ်နိုင်ပါကြောင့်. (တမန်တော်ဝတ္ထု 2:24)
ယေရှု၏ကိုယ်ခန္ဓာပိုငျးအခွားကို၎င်းငျးနှင့်ကျမဲ့မတည်မနေခဲ့ပါဘူး. တနင်္ဂနွေနံနက်, သူကအာဏာနှင့်ဘုန်းအသရေနှင့်ပြည့်ဝ၏အ grave- မှထမြောက်တော်မူခဲ့သည်. သူကမြင်ရ၏, ဇာတိပကတိ၌, သူသေဆုံးပြီးနောက်ရာပေါင်းများစွာအားဖြင့်, မကြာမီပြီးနောက်ကောင်းကင်သို့မတက်ပြီ.
ယရှေုသညျသင်ျခြိုငျးမှထမြောက်တော်မမူလျှင်, ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့ "ကောင်းမွန်သောသောကြာနေ့။ " ဒီမခေါ်နိုင်သညျယရှေုသင်္ချိုင်းတွင်း၌ရှိသေးကြီးဘူးဆိုရင်, ငါလုံးဝမျှော်လင့်ချက်ရှိသည်မယ်လို့. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျိုးပဲ့ကမ္ဘာကြီးအတွက်ပြိုလဲသည်လူသို့မဟုတ်ပွနျလညျထူထောငျဘို့ရွေးနှုတ်ခြင်းမရှိမြော်လင့်စရာဖြစ်လိမ့်မယ်. ငါတို့မူကားသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုသိ, နှင့်ဤကျွန်တော်တို့ကိုဝမျးမွောကျဖို့နဲ့ကိုယ်တော်၌ခိုလှုံဖို့အကြောင်းပြချက်ပေးသည်.
သင့်ရဲ့ငိုခငျြးနှငျ့သငျ့ R.I.P. ရဲ့ Save, ယရှေုခရမရှိတော့သသောကွောငျ့. သူကကောင်းကောင်းအသကျရှငျနဲ့ဖြစ်ပါတယ်, သူအထွဋ်အမြတ်တည်းဟူသောစိုးစံ! ကောင်းသောသောကြာနေ့သင်နှင့်ငါကဲ့သို့သောဆိုးသောသူတို့အဘို့အဧဝံဖြစ်ပါသည်.
dempsey tapley • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:44 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ပယင်း • မတ်လ 19, 2015 တွင် 10:17 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
အဲဒါကိုကြိုက်တယ်! I am almost reading this2နှစ်ကြာပြီးနောက်, but it was definitely worth my read and it just inspired me to praise and hope all the more for the future GOD has in store for me and my family in and through JESUS CHRIST! IN JESUS NAME, အာမင်!